BCC က်ျပီး အခန္းက်ယ္ သံပန္းတပ္ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာေျကြျပားကပ္ pressure pump တပ္ထား ပဥၥမထပ္ ၁၂ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပ ဆိတ္ျငိမ္ ေအးခ်မ္း ရပ္ကြက္သန္႕ ေလေကာင္းေလသန္႕ အလင္းေရာင္ရ ၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး ေက်ာင္းနီး ဘဏ္နီး ပတ္ဝန္းက်င္သန္႕ ေစ်းနဳန္း ညိနိွဳင္းနိုင္ပ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9903102 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...ေတာင္ဥကၠလာ ၁၃ရပ္ကြက္ ယသဝတီလမ္းမေပၚ တိုက္ခန္းအသင့္ျပင္ၿပီးေရာင္းပါမည္...🙏🙏🙏
398 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9868047 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
📣 တောင်ဥက္ကလာ, တိုက်ခန်းအရောင်း📣
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9833984 အတွက် SABEI REAL ESTATE စံပယ္အိမ္ျခံေျမ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာ၊ (10x60) အိပ်ခန်း(၂)ခန်းပါ တိုက်ခန်း အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9815940 အတွက် Aung Htet Aung Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အိပ်ခန်း(၁)ခန်းပါ ပထမထပ် တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9786074 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာ ၊ ယသဝတီ (၁၄)လမ်း ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းအား ( Bank Home Loan ) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9711384 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09458887972, 09422888894, 09422888893, 09422888892
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9709325 အတွက် Arkar Yan Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9702689 အတွက် SABEI REAL ESTATE စံပယ္အိမ္ျခံေျမ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်